အဆိုပါဝေါဟာရကို '' ခရီးသည်ကျောင်းသား '' ကိုယ့်အိပ်ဆောင်မရအခြေအနေ, ဒါပေမယ့်အကွာအဝေးဖျောညှနျးဖို့ထိထိရောက်ရောက်မကိုအသုံးပြုသည်။
သင်တစ်ဦး Off-ကျောင်းဝင်းတိုက်ခန်းထဲမှာနေထိုင်တဲ့သူတစ်ဦး sophomore မခေါ်လိမ့်မယ် '' ခရီးသည်ကျောင်းသား။ '
ကျောင်းကိုနာရီဝက်သူ့ရဲ့ကလေးဘဝအိမ်တွင်နေထိုင်ပြီး drives တွေကိုသူတစ်ကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်ဦးခရီးသည်ကျောင်းသားပါလိမ့်မယ်။
ခရီးသည်ကျောင်းသားများအတွက်လည်းအလုပ်လုပ်နေချိန်တွင်ကျောင်းသို့သွားသူကသူ့ကိုယ်ပိုင်မိသားစုနှင့်အတူ 30-တစ်ခုခု, ပါဝင်သည်။
နေ့ကိုတလျှောက်လုံးလာနှင့်သှားတဲ့သူကပိုကျောင်းသား drivers တွေကိုထားရှိရန်အကြီးစားယာဉ်ရပ်နားအများကြီးနဲ့ရက်ရက်ရောရောယာဉ်ရပ်နားမူဝါဒများ။
ကျောင်းသားသမဂ္ဂ Locker တွေရှိစေခြင်းငှါ။ ဒါကသူတို့အဘယ်သူမျှမလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်န်းကျင်ကသူတို့ကိုသယ်ဆောင်ဖို့ရှိသည်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျောင်းဝင်းအပေါ်စာအုပ်များနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များကိုသိမ်းထားဖို့ခရီးသည်ကျောင်းသားများကိုအာကာသခွင့်ပြုပါတယ်။ ဤသည်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ကိရိယာများသို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းကိရိယာများလိုအပ်ကြောင်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဒီဂရီအပေါ်လုပ်ဆောင်နေသူတွေကိုမှီခိုကျောင်းသားများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
ကျောင်းဝင်းအိမ်ရာဘို့လိုအပ်ကြောင်းဒါသည်ဤကျောင်းများပုံမှန်အားနည်းပါးလာဆောင်ရှိကြီးမြတ်သည်မဟုတ်။ အတော်များများအားလုံးမှာ On-ကျောင်းဝင်းအိမ်ရာပူဇော်ကြပါဘူး။
နေဝင်သောအခါ, ကျောင်းဝင်း empties ။ တနင်္ဂနွေနှင့်ကျောင်းဝင်းလှုပ်ရှားမှုများပုံမှန်အားဖြင့်သောကြာနေ့တပတ်မှတဆင့်ပုံမှန်တနင်္လာနေ့စဉ်အတွင်းစီစဉ်ထားကြသည်များအတွက်တူညီသောမှန်သည်။
အိမ်မှာ Living ငွေအများကြီးကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။ တောင်မှချွတ်-ကျောင်းဝင်းတိုက်ခန်းများအခန်းတစ်ခန်းနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ထက်စျေးနှုန်းချိုသာရှိနိုင်ပါသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, တစ်ဦးခရီးသည်ကျောင်းသားဖြစ်ခြင်းအနည်းငယ်ပျက်စီးခြင်း, အဓိကအားဖြင့်တစ်ကျောင်းကနေအဆက်ဖြုတ်၏ခံစားမှုနှင့်အခြားကျောင်းသားများကိုရှိပါတယ်။ အဆက်အသွယ်မပြတ်ဖို့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်သော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံက '' စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသာ '' လေထုနဲ့တူခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ကျောင်းကျောင်းဝင်းအပေါ်ဆောင်ကမ်းလှမ်းခဲ့လျှင်, အာကာသမကြာခဏအလွန်ကန့်သတ်သည်။ သည်အခြားကောလိပ်များမတူဘဲ, ပထမနှစ်ကျောင်းသားတွေအိမ်ရာအာမခံချက်မရှိပါကြောင်းတိုင်း freshman ကျောင်းဝင်းပေါ်မှာအသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟုယူဆမပေးပါ။
အိမ်ရာနောက်ဆုံးနေ့မှအနီးကပ်အာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်ကြိုတင်ကောင်းစွာသင့်လျှောက်လွှာတင်သွင်း။ တချို့ကကျောင်းများတွင်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးလာ, ပထမ-တာဝန်ထမ်းဆောင်အခြေခံပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအဖြစ်မကြာမီသင်လက်ခံမှုစာတစ်စောင်လက်ခံရရှိအဖြစ်လျှောက်လွှာတင်သွင်းရန်မကြာခဏအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာချွတ်-ကျောင်းဝင်းများမှာပေမယ့်ကျောင်းရဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများမှဖြည့်တင်းသောတိုက်ခန်းများများအတွက်အစောပိုင်းလျှောက်ထားရန်လည်းအရေးကြီးပါသည်။ ရှုပ်ထွေးပြီးကျောင်းဝင်း၏လမ်းလျှောက်အကွာအဝေးအတွင်း၌ပါကအစာရှောင်ခြင်းအဖြစ်ကိုကောင်းစွာတက်ဖြည့်ပါလိမ့်မယ်။ ချက်ချင်းအတွက်သင့်လျှောက်လွှာ Get သို့မဟုတ်သင်ထင်ထက်ဝေးတဲ့ခရီးသည်နိုင်!
UC Berkeley ဓာတ်ပုံလှည့်လည်
အဆိုပါ Babson ကောလိပ်ကျောင်းပရဝုဏ်၏ဓာတ်ပုံခရီးစဉ်ကိုယူ
န်ဆောင်မှုများကာကွယ်ဆေးအထောက်အထား Theft စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း Credit နိုင်သလား?
စပိနျ Speaking ကမ္ဘာ့အားလပ်ရက်
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Julius II ကို
အစဉ်အဆက်5အကောင်းဆုံး Surf, Movies
Antithesis (Grammar နှင့်အပြောအဆို)
သမ္မတအိုဘားမားဟာနိုင်ငံခြားရေးကျောင်းသား ID ကိုဖူးသလား?
ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံသူ Mike ဝဲလ်ရဲ့ step-by-အဆင့် Long ကဤနေရာသို့သွားရန်သိကောင်းစရာများ
သတ္တုဘုရားကျောင်း - XI ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
2011 ခုနှစ် Harley-Davidson ဝယ်သူလမ်းညွှန်
2018 ခုနှစ်တွင်အဆိုပါ7အကောင်းဆုံးစက်ဘီးစီးကွန်ပျူတာကိုဝယ်ရန်